सरकारले राज्य लुट्यो : एउटै रेडियोको भागमा ६५ लाख, पत्रिकाको भाग २० लाख
गृहपृष्ठ » अर्थ » सरकारले राज्य लुट्यो : एउटै रेडियोको भागमा ६५ लाख, पत्रिकाको भाग २० लाख
शनिवार ६ कार्तिक, २०७८
काठमाडौ । भर्खरै बाहिरिएको तथ्यले सरकारले नै राज्य लुट्यो भन्दा फरक नपर्ने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सहयोगको नाममा राज्यकोषको ब्रम्हलुट गर्नुभएको हो ।
निजी पत्रिका र रेडियोलाई मनलाग्दी पैसा दिएर राज्य कोष भत्काउनुभएको छ ।
उहाँले आफ्नो पार्टीको सांसदको रेडियोलाई ६५ लाख बजेट दिनुभएको छ । एउटै रेडियोलाई ६५ लाख सहयोग ? अझ निजी पत्रिकालाई २० लाख दिनुभएको छ ।
रोल्पाको जलजला रेडियोलाई ६५ लाख दिइएको छ । उक्त रेडियो सञ्चालक समितिका अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र पुन हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नै रेडियोलाई दुई शीर्षकमा ६५ लाख बजेट विनियोजन गराएर जनमतको धज्जी उडाउनुभएको छ ।
भवन निर्माणका लागि ३५ लाख, एफएमको ट्रान्समिटर बनाउनका लागि २० लाख र मेसिनरी औजार सहयोग नाममा १० लाख गरी कूल ६५ लाख रुपैयाँ एउटै रेडियोलाई दिएपछि मुख्यमन्त्रीका आसेपासे नै चकित बनेका छन् ।
निर्वाचनमा आफूलाई आवश्यक पर्ने मिडिया परिचालनका लागि सांसदकै रोजाइमा कतिपय सञ्चार संस्थालाई बजेट पारिएको छ। यो सरासर निर्वाचन प्रभावित गर्ने खेल हो ।
प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वसन्त गिरी नै कल्याणकारी कोष काटेर बजेट आफ्नो मिडियामा ल्याउन सफल हुनुभएको छ । उहाँ प्रधान सम्पादक रहेको कपिलवस्तुको बुद्ध दर्पण पत्रिकालाई मात्र २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यो गिरीको निजी कम्पनी हो। यो पत्रिकाको भवन निर्माणका लागि सरकारले २० लाख बजेट दिएको हो। पत्रकारहरूको साझा संस्था कपिलवस्तु पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि भने जम्मा ५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यसले थाहा हुन्छ की कति राजनीति भएको छ ।
पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बजेट बाँढ्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
‘यो सरासर गलत हो, पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति यसको खिलाफमा उभिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यक्ति र निजी संस्थालाई बजेट दिने काम नै गलत छ। यो आपत्तिजनक कुरा हो।’ उहाँले सरकारलाई बजेट सच्याउन समेत सुझाव दिनुभयो ।
यता प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिङ विश्वकर्माले २० लाख हात पार्नुभएको खुल्न आएको छ ।
उहाँको रोल्पा समाचार पत्रिका र अफसेट प्रेसलाई सरकारले बजेट दिएको हो। जनताको करबाट संकलन भएको बजेटलाई सरकारले सोझै कार्यकर्तालाई बाँढेपछि त्यसको कडा आलोचना हुँदै आएको छ। यो अत्यन्तै खेदजनक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले रु २५ अर्बको ट्रेजरी बिल ‘सोझै खरिद’ गर्ने
सावधान ! बैकको पैसा यसरी डुब्ला : म्यानेजरले मिटरब्याजमा लगाउने गरेको खुलासा
आज कति छ सुनको मूल्य
घट्दै कच्चा तेलको मूल्य
साताको पहिलो दिन आज सुनको मूल्य बढ्यो
एकैदिन १६०० ले बढेर आज कति पुग्यो सुनको मूल्य
राष्ट्र बैंकले रु १४ अर्ब ८१ करोड ३२ लाखको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, कति पुग्यो आज भाउ ?
आज सुनको मूल्य बढ्यो, कति पुग्यो हेर्नुहोस्
यस्तो छ धेरै नेपालीहरु रहेका मुलुकहरुको आजको मुद्रा विनिमयदर [ सूचीसहित ]
एसियाका सर्वाधिक धनि व्यक्ति मुकेश अम्बानीलाई जोडदार झट्का
सुनको मूल्यमा देखियो भारी गिरावट, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
यी हुन् सबैभन्दा बढी कर तिर्ने १५ संस्थाहरू, नेपाल टेलिकम पहिलो